के पहिल्यै भ्याक्सिन बनाएर विश्वलाई ढाँटिरहेको छ चीन ? अचानक कुरा किन फेरियो ? - Himali Patrika
के पहिल्यै भ्याक्सिन बनाएर विश्वलाई ढाँटिरहेको छ चीन ? अचानक कुरा किन फेरियो ?
हिमाली पत्रिका २७ जेष्ठ २०७७, 3:17 am
काठमाडौं। के चीनले पहिल्यै भ्याक्स्नि बनाइसकेको छ र विश्वसँग झुट बोलिरहेको छ ? बेलायतका लागि चिनियाँ राजदूतले लण्डनमा एक कार्यक्रममा दिएको बयानलाई लिएर अहिले यो आशंका उब्जिएको छ ।
लण्डनमा आयोजित एक बैठकमा चिनियाँ राजदूतले आफ्नो देशले भ्याक्सिन तयार गरेको जानकारी दिए । तर, पछि चीन यो कुराबाट ब्याक भएर कुरा फेरेपछि अहिले चीन फेरि शंकाको घेरामा आएको छ ।
बेलायती अखबार डेलीमेलका अनुसार चिनियाँ राजदूत लिउ जियाओमिंगले बैठकमा भनेका थिए ‘हामी भ्याक्सिनको चौथो चरणको ट्रायलमा पुगेका छौं । हामी यो भ्याक्सिन विश्वलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छौं ।’ चौथो चरणको ट्रायलको अर्थ हो भ्याक्सिन धेरै हदसम्म सफल भइसक्यो र यो अब ठूलो जनसंख्याको लागि दिन तयार भइसकेको छ ।
पछि अखबार डेलीमेलले लण्डनस्थित चिनियाँ दूतावाससँग राजदूतको यो बयानबारे सोध्दा अखबारलाई एक ट्रान्सक्रिप्टको लिंक पठाइयो । रिपोर्टका अनुसार ट्रान्सक्रिप्टमा राजदूतका शब्दहरुलाई बदलेर भ्याक्सिन ‘दोस्रो चरण’मा भएको लेखिएको थियो । तर, डेलीमेलका अनुसार राजदूत जियाओमिंगले बैठकमा अंग्रेजीमा बोलेका थिए ।
रेकर्डिङमा उनले भ्याक्सिन चौथो चरणमा पुगेकोबारे बताइरहेको सुन्न सकिन्छ । केही अन्य मिडिया रिपोर्टमा चीनले आफ्नै राजदूतको भनाइलाई सेन्सर गरेको दावी गरिएको छ ।
बैठकमा बेलायतको उद्योग जगत र औषधी कम्पनीका शीर्ष प्रतिनिधिहरुले भाग लिएका थिए । उनीहरु राजदूतको कुरा सुनेर छक्क परेका थिए । चिनियाँ राजदूत जियाओमिंगले बैठकमा प्रस्ट रुपमा भनेका थिए कि चीन भ्याक्स्नि विकासको उन्नत चरणमा पुगिसकेको छ । चीनको पछिल्लो व्यवहारपछि उसले अहिले नै पश्चिमा देशहरुलाई आफू भ्याक्सिन विकासमा धेरै अगाडि रहेको जानकारी दिन नचाहेको मानिएको छ ।
केही रिपोर्टमा यो पनि दावी गरिएको थियो कि चीनले कोरोनाभाइरसँग सम्बनिधत जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिन जनवरीमा ढिलाइ गरेको थियो । यद्यपि डब्लुएचओ र चीनले यी आरोपलाई खारेज गरेका थिए । यसअघि गत महिना राजदूत जियाओमिंगले भनेका थिए ‘हामी चाहन्छौं कि भ्याक्सिन उपलब्ध होस् र गरिब तथा कम विकसित देशलाई उपलब्ध होस् । हामी सधैं यो मान्छौं कि कोभिड १९ ले विश्वलाई नजिक ल्याएको छ । हामी मानवताको साझा भविष्यमा विश्वस गर्छौं ।’